Waxgaradka gobolka Bari oo baaq u diray Siyaasiyiinta Dawlada mucaaradsan, (Sawiro + Cod) – Radio Daljir
Diseembar 9, 2012 11:34 b 0
Boosaaso, Dec 9, Kulan looga hadlayay sidii looxoojin lahaa nabad gelyada Gobalka Bari ayaa waxaa maanta lagu qabtay xarunta Gobalka ee Maagalada Bosaaso, waxana kasoo qaybgalay dhamaan nabadoonada beelaha dega Gobalka Bari.
Kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray sidii ay naabadoonadu ay bulshada ugu iftiiminlahaayeen qiimaha ay bulshada ugu fadhido nabadu, waxana ay nabadoonadu qireen inaysan nolashu qiimolahanayn hadii lawaayo nabadgelyo.
Nabadoon Yuusuf faarax Cali oo kamid ahaa waxgaradkii kasoo qaybgalay ?kulanka ayaa isbar bardhigid kusameyay nabada iyo naba la,aanta waxana uu xusay in ay kaalintooda kaaqadan donan sidii ay bulshada utusi ?lahayeen faa,idada ay nabadu uleedahay .
Sidoo kale Nabadoonka ayaa kale kahadlay nidaamka cusub ee ay Puntland hiigsanayso taasi oo uu kumacneeyay inay tahay tallabo wanaagleh loona bahanyahay in lataageero, isagoona carabaabay in nidaamka xisbiyadu ay kafaa,ido badantahay nidaamkii hore bulshadana ay ?hormar u tahay.
Waxgaradkii kulanka kasoo qayb galay ayaa dhamaantood si isku mid ah uga hadlay qiimaha ay bulshada u leedahay nabadgelyada, iyadoo si wada jir ah usoo dhoweeyey nidaamka cusub ee Puntland u guurtey oo ku salaysan xisbiyo badan iyo doorashooyin xor ah.
Ugu danbayn Nabadoonadii shirka yeeshay ayaa si weyn ugu baaqay in nabada laga shaqeeyo iyagoo Dawlada iyo Siyaasiyiinta kasoo horjeeda ku booriyey inay wax walba ku dhameeyaan is afgarad si loo ilaaliyo midnimada iyo xasiloonidda Puntland.